Ny Apple Watch dia nandresy ny firaketana ny varotra rehetra nandritra ny telovolana farany | Vaovao IPhone
Raha vantany vao nifoha maraina aho dia namaky bitsika iray izay nilaza hoe: "Techies, tonga ny fotoana hanaiky fa fahombiazana ny Apple Watch." Izaho manokana dia tsy hiteny firy aho, na raha izany, Tim Cook sy ny orinasa dia hanome isa ny varotra ho an'ny famantaranandro marani-tsaina, saingy tsy maintsy ekena fa, hatramin'ny nanombohany ny volana aprily 2015, ny Apple Watch dia nampitombo ny varony mihabe.
Araka ny efa fantatrao raha mamaky matetika ny iPhone News ianao, omaly 31 Janoary, dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety i Apple izay niresaka momba ny telom-bolany farany, fifandanjana izay nitateran'ny Cupertino rakitsoratra vaovao. Tsy mahagaga raha nanampy ny firaketana an'io firaketana io ny fahasalamana azo tamin'ny iPhone ary, ankoatry ny zavatra hafa, firaketana tombom-barotra vaovao tratran'ny Apple Watch, izay manondro ny Apple Watch amidy tokoa tamin'ny vanim-potoanan'ny Noely.
Tim Cook: "Ny fangatahana ny Apple Watch dia mafy tokoa tamin'ny Krismasy ka tsy afaka nanao ampy izahay."
Rehefa avy nanolotra ny mizana farany ary toy ny mahazatra, Tim Cook dia niresaka momba ny telovolana farany, milaza fa ny fangatahana ny Apple Watch amin'ny Krismasy dia "mahery tokoa" ka Apple "tsy nahavoka vola", milaza fa mangataka zavatra betsaka kokoa noho izay azony atao izy ireo. Mety hieritreritra isika fa izany dia zavatra mitovy amin'ny zava-mitranga amin'ny AirPods raha tsy noho ny zava-misy fa ny headphones tsy misy tariby Apple dia ao anatin'ny taranaka voalohany ary ny famokarana azy ireo dia miadana kokoa noho ny tokony hanaovana fitaovana iray izay hitantsika voalohany fotoana amin'ny volana septambra 2014.
Hatramin'ny fifandanjana ara-bola voalohany nanangonana tahirin-kevitra avy amin'ny Apple Watch ary hatramin'ny omaly, ny fiambenana Cupertino dia ao anatin'ny a fizarana «Hafa» izay nahita ny tombony nianjera 8% raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Ity fizarana "Hafa" ity dia misy koa ny Apple TV, iPod, vokatra Beats, ary kojakoja hafa toa ny AirPods. Ny tombotsoan'ity fizarana ity dia nidina tamin'ny 4.350M $ tamin'ny taon-dasa ka hatramin'ny 4.020M $ tamin'ity taona ity ary ny ampahany amin'ny lesoka dia ny Apple TV.
Nanamafy i Luca Maestri Financial Times de Nihena ny varotra Apple TV Mikasika ireo tamin'ny taon-dasa, zavatra lôjika raha raisintsika fa tamin'ny 2015 dia natomboka ny taranaka fahefatra an'ny boaty ambony an'i Apple ary, na dia nandefa ny taona fahadimy tamin'ny taona lasa aza izy ireo dia miresaka momba ny fitaovana iray izay tsy mila manavao raha vao.
Na ahoana na ahoana, ny azo antoka dia salama tsara ny Apple Watch, na iza na iza lanja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia namaky ny firaketana ny varotra rehetra nandritra ny telovolana farany
Soa ihany, soa fa nahavita nanatsara ny famantaranandroko paoma aho, izao niaraka tamin'ny fitaovako s3 tena faly, mihoatra noho ny famantaranandro paoma.
Hiverina ao amin'ny Apple Music ny mozikan'i Prince amin'ny 12 Febroary